I-GNPC Scholarship 2020/2021 yaabafundi baseGhana-Faka apha ngoku!
Ngaba uyibonile imoto entsha yeapile (iCAR) Jonga ividiyo apha
Yeka ukuya kwinqanaba
I-World Scholarship Forum
Amazwe eSholarship Opportunities Online
IGhana leSizwe lePetroleum Corporation -I-GNPC Scholarship 2020/2021
Septemba 9, 2020 By excelajah 319 Comments
I-Ghana National Petroleum Corporation (i-GNPC) iyavuya ukubiza izicelo ezivela kubafundi abafanelekileyo baseGhana kwiGhana yeSizwe yePetroleum Corporation - i-GNPC Scholarship 2020/2020.
I-GNPC Scholarship iyafumaneka kubafundi baseGhana abaphishekela igraduate kwaye iphumelele inkqubo Iiyunivesithi zaseGhana.
Hlala phantsi kwaye uye kwi-scholarship le yokudibana nokuba lithuba obukade ulifuna lokuqhubela phambili umsebenzi wakho. I I-World Scholarship Forum Iqela lilungiselele zonke iinkcukacha ozifunayo ukuphumelela i-GNPC Scholarship 2020/2021. Khawuleza kwaye ufake isicelo ngoku!
Mayelana neGhana National Petroleum Corporation
Kutheni iGhana National Petroleum Corporation (GNPC) Scholarship 2020
I-GNPC Scholarship 2020 iimfuno kunye neendlela zokufaneleka:
I-Ghana National Petroleum Corporation-GNPC Scholarship 2020 / 2021 -Ukhetho
Ungasifaka kanjani isicelo seGhana leSizwe lePetroleum Corporation-GNPC Scholarship 2020
I-GNPC i-2020 yesicelo sokugqibela
Ikhonkco lesicelo se-GNPC Scholarship 2020
The Ghana National Petroleum Corporation (GNPCyiarhente yaseburhulumenteni ejongene nokuhlola, ukunika ilayisensi kunye nokuhambisa izinto ezinxulumene nepetroleum eGhana. Umbutho wasekwa ngonyaka we-1983 ukuba ungene endaweni yeSebe lePetroleum elaliyiarhente ephantsi koMphathiswa Wezamandla Nezamandla.
Isebe linoxanduva lokungenisa elizweni ioyile ekrwada kunye neemveliso zepetroleum kuqoqosho lwaseGhana.
Ngeli xesha, igunya lokuvavanywa kweoyile lalibanjelwe ukuba liCandelo lobuGcisa le-Ofisi yoMphathiswa Wezamafutha kunye naMandla kunye neSebe loPhando lweJoloji.
Umbutho wadalelwa ukukhuthaza iinjongo zikaRhulumente waseGhana zokubonelela ngepetroleum eyaneleyo nethembekileyo kwilizwe kunye nokufunyanwa kweoyile ekrwada kwimimandla yelizwe.
Kwakhona, iqumrhu liphakathi kwemisebenzi yalo yokukhuthaza imisebenzi yokuhlola ipetroleum, ukuvavanya ukufunyanwa kwepetroleum esele ikhona, ukuqinisekisa ukuba iGhana izuza kakhulu kuphuhliso lwezixhobo zepetroleum zelizwe.
Umbutho ukhuthaza uqeqesho lwabantu baseGhana kwimisebenzi enxulumene nepetroleum kwaye uqinisekisa ukhuseleko kwindalo esingqongileyo kuyo yonke imisebenzi enxulumene nepetroleum.
Ngaphandle kweenkonzo ezinxulumene nepetroleum, i-GNPC nayo iqhuba ngokuqhubekayo uxanduva lwayo lwentlalo phakathi kokubandakanya ukunikezelwa kweengxowa-mali kubafundi baseGhana ukuba baphumelele imfundo yabo kwizinga eliphezulu ekufundeni.
The I-GNPC ipheleleyo ukufundiswa kwabafundi baseGhana abaye bafumana ukungena kwiiGhana eziPhakamileyo zaseGhana zikaRhulumente kwiGhana kodwa nazo zifuna Imali inkxaso.
Abasetyhini kubuNjineli nakwiGeosciences okanye bafumene ukwamkelwa ukuba bafunde iiDigital / iidanga zokuthweswa isidanga Iinkqubo kwiiSayensi, iTekhnoloji, ubuNjineli, iMathematics, ZoLwazi lwezoLimo, IMfundo eZodwa, okusingqongileyo, impilo noGutyulo.
Eminye imiba ebalulekileyo iya kubandakanya abasetyhini kwezobunjineli, abafundi abakrelekrele nabasweleyo, abo banemiceli mngeni kunye, iikhosi zeoyile kunye negesi ngokulandela ukonwabela ukhetho ngexesha lenkqubo yokhetho.
Inqanaba / Ummandla weSifundo
Izifundo ze-GNPC zezi Igraduate izifundo kwiiyunivesithi zaseGhana
Izifundo ze-GNPC ziyafumaneka kubafundi inzululwazi, ITeknoloji, Engineering, kwaye IMathematika kumaziko aphakamileyo aseGhana aseGhana
Ngaphezulu kweZidanga zesidanga sokuqala
I-GNPC iya kuthathwa eGhana. Ungajonga enye I-African Scholarships ziyafumaneka kubafundi baseGhana kunye namanye amazwe aseAfrika.
Ungasebenzisa la mathuba okubhalwa kweengxowa-mali ukuxazulula ezininzi zeengxaki zakho zemfundo. Khangela ezinye iingxowa-mali ongayifaka isicelo kwi-2020 ukuze ufunde kuyo iYurophu, iAfrika, Asia, America, Njl
Isifundi se-GNPC senzelwe abahlali baseGhana. Ulwabiwo-mali lwaMazwe ngaMazwe ziyafumaneka kubafundi bamazwe ngamazwe abafuna Funda kwelinye ilizwe nakweliphi na ilizwe.
Funda kwakhona ukuba ufuna ukufunda ngaphandle kwelizwe lakho lasekhaya Izimpendulo ezilula kunye neeNgcaciso malunga nokuSebenza nokuThola iScholarship.
Ngaphandle kwe I-GNPC Scholarship 2020/2021, kukho ezinye izifundi ezikhoyo ngamazwe abafundi ukuba bafunde kwamanye amazwe. Unokujonga yethu ufundiso ngelizwe ukufikelela kuzo zonke iingxowa-mali ezikhoyo.
Kufuneka kufundwe ukuba ufuna ukuphumelela ibhaso: I-15 Iingcebiso ezibalulekileyo zokunqoba i-Scholarship
QHAFAZA APHA UKUZE UTSHINTSHE NESI NGOKU
I-GNPC Scholarship, ngokwemali esayinwe kwaye ikhutshwe yinkampani yeoli yombuso, ifaka iifundo, iindleko zokuhlala, isibonelelo sencwadi kunye nesibonelelo seprojekthi kubafundi abaqeqeshiwe.
hayi ibe ngaphezu kwe-35 iminyaka ngo-1 Oktobha 2020
Ufumene imvume yokungena kwi-Undergraduate, Masters or Ph.D. Inkqubo yesidanga kwiYunivesithi kaRhulumente yaseGhana ngexesha lokufaka isicelo
Ukhetho luya kunikwa:
Iinkqubo zesidanga kwiNzululwazi, iTekhnoloji, ubuNjineli neMathematics (STEM); Indalo esingqongileyo, iMpilo noGutyulo, iMfundo eKhethekileyo kunye neeNzululwazi zezoLimo
Abafundi abanezakhono kodwa abahluphekayo
Masters / Ph.D .:
Iikhosi ezinxulumene neoli kunye neGesi
IzeNzululwazi, ubuChwepheshe kunye nobunjineli
Abafake izicelo abafuna ukufaka isicelo sokuba bafundise i-scholarship bafumane kwaye bazalise I-GNPC ifom kwiwebhusayithi ye-GNPC- gnpcghana.com
IGhana National Petrolium Corporation-GNPC Scholarship Ifomu yokufaka isicelo
Ivula ngomhla we-8 kaSeptemba 2020
Kuvalwa ngomhla we-14 kuSeptemba 2020
Ileta yesicelo kuquka i-Admissions ileta evela esikolweni, i-imeyili yoqhagamshelwano nenombolo yefowuni yomfaki sicelo kufuneka ithunyelwe nge-imeyile SCHOLARSHIPS@GNPCGHANA.COM.
Apho unayo, iinkcukacha ozifunayo ukuze uthathe inxaxheba kwi-GNPC Scholarship 2020/2021, musa ukufunda kunye nokupasa, yenza iinzame ngokufaka isicelo sobufundi.
Ukufaneleka ukuphumelela i-EBook yethu ye-scholarship
Fumana yethu I-Echolarship Ebook ngokukhululekile ngoku, bonisa umdla kumacandelo okuphawula kunye ne-Ebook izothunyelwa kuwe. Oku kunikezelwa ngabantu bokuqala be-50
Ukhuphiswano lweSikolo seSekondari lweNNP / DRM esiSekondari saBafundi eNigeria
I-2020 / 2021 i-Scholarships ngokupheleleyo
Iincwadi eziGcweleyo zeSayensi yamaZwe onke
I-Erasmus Mundus Scholarship kuwo onke amaZwe
Ulwabiwo-mali kumazwe athuthukayo
IZIBHENGO ZESABADALU ZABONKE BONKE abafundi
Uluhlu lweeKholeji zeeNjineli ze-10 eziPhambili kwiHlabathi
Inkqubo ye-Al Ghurair STEM Arab Scholars Program
I-Washington State Opportunity STEM Scholarship, eU.SA
I-TechWomen exhaswa ngemali ngokupheleleyo kwiNkqubo yeNkokeli eziKhulayo ye-STEM yokufunda e-USA
I-Tullow Oil Scholarship ye-Postgraduate Programme
Ubungcali boRhulumente baseTshayina / i-African Union Stuckships ku-Young Africans
I-KNUST / MasterCard Foundation Scholarship yaBafundi baseGhana nabaseAfrika
UPHAKANYELWE: Uluhlu lweeScholarship zabafundi baseGhana abaNabafundi abasuka kwizidanga kunye nabaphumelele isidanga
Inkqubo ye-Ashesi University College MasterCard Foundation Scholarship Program, eGhana
Ngaba eli nqaku lidibana neemfuno zakho ezikhawulezileyo? ukuba ewe, nqakraza iqhosha loQhagamshelwano ukuze wabelane nabangani bakho. ukuba akukho, shiya impendulo kwibhokisi yebhokisi ukubonisa inkxalabo yakho okanye ubuze umbuzo kwaye siza kubuyela kuwe ngokukhawuleza. Nceda ubuyekeze ngokucacileyo ingxelo yethu ngezansi.
I-Ajah Excel yiblogger ephezulu yemfundo kunye nomsunguli weForum yeScholarship yeHlabathi.
Ukuba ngaphezulu kweminyaka ye-6 yamava kwizifundo zamazwe aphela kunye nokufunyanwa kwamathuba.
Unokunxibelelana naye usebenzisa amakhonkco angezantsi.
Nsoh Bright Atingane uthi
January 18, 2020 kwi 2: 50 am
Nceda unomdla kwincwadi ye-ebooks
Ummangaliso Ugonma uthi
February 5, 2020 kwi 4: 23 pm
ZIKHUPHELELE I-ECHOK YASEKHAYA KWAMAHHALA.
Inolwazi oluneenkcukacha ngendlela yokufunda ePhandle, ukuba zeziphi izinto zeScholarship, kunye
Hacks ukuphumelela iScholarship.👇👇👇
January 16, 2020 kwi 9: 46 am
Nceda ndenze isicelo se-2019/2020
Baza kwaziswa nini abafaki zicelo
Adiele Greatman uthi
Oktobha 6, 2020 kwi-10: 16 pm
Kucelwa ulandele iinkcukacha ezichazwe kwisithuba
UAsamoah George uthi
Novemba 21, 2019 kwi-11: 04 pm
Ndicela ukuba uqaphele xa kukho nayiphi na imali yokufunda
UKpokpor uIsake uthi
Novemba 19, 2019 kwi-3: 37 pm
Nceda ucwangcise abafundi ukuba bakulungele ukufaka isicelo se-GNPC
Novemba 19, 2019 kwi-3: 33 pm
Nceda ucwangcise umfundi ukuba afake isicelo se-GNPC
Novemba 17, 2019 kwi-4: 29 pm
Nceda umntu andincede ngekhowudi yam yokuqinisekisa
UBashirudeen Tariq-Ahmed uthi
Oktobha 17, 2019 kwi-8: 19 pm
Nceda ndingumfundi oqhubeka nesidanga sokuqala ofake isicelo sokufumana amabhaso okufunda nge-2019/2020. Ndicela ukwaziswa ngobubele ukuba liya kunikwa nini eli bhaso?
Oktobha 21, 2020 kwi-11: 19 pm
Iindaba ezimnandi. Nazi ezona mfundo zilungileyo zifumanekayo kuwe: worldscholarshipforum.com/?s=undergraduate+scholarships
I-ABUKARIM ABUBAKARI uthi
Oktobha 12, 2019 kwi-1: 18 pm
Nceda ndingumfundi okwinqanaba le-100 kwiyunivesithi yezemfundo, eWinneba kwaye ufake isicelo semfundo ye-GNPCF. Nceda ndifuna ukwazi ukuba izakuqala nini ukusebenza. Enkosi!
Oktobha 12, 2019 kwi-1: 07 pm
Nceda ndifuna i-eBook
January 30, 2020 apha 5: 14 pm
YIBO I-SCHOLARSHIP EBOOK EMAHHALA YOKUFUNDA.
Adaboro David Anongre uthi
Oktobha 1, 2019 kwi-5: 04 pm
Ndicela ufake isicelo sobhaliso ndingumfundi oqhubekayo wenqanaba le-UDS 200, ndifuna ukwazi ukuba izofika nini
NgoSeptemba 26, 2019 kwi-3: 14 pm
Nceda uncede undithumelele i-eBook. Ndiyidinga nyani
NgoSeptemba 20, 2019 kwi-9: 33 pm
Umsebenzi omkhulu owenziweyo.
Ndinomdla kakhulu kwincwadi ye-e-bookship ndicela undithumelele yona
February 5, 2020 kwi 4: 34 pm
Banye Nong-welba Cyrusacus uthi
NgoSeptemba 7, 2019 kwi-9: 41 pm
Ndifumene incwadi yokwamkelwa yokufunda iMathematics kwiYunivesithi yezezeMfundo (eWinneba) kulo nyaka.
Ngaba ndisafanelekile ukufumana le mfundo?
UMhlanguli weAcolatse uthi
NgoSeptemba 3, 2019 kwi-11: 28 pm
Nceda igama lam ngu-Acolatse uMkhululi ndinomdla kwi-gnpc Scholarship ndicela uvule izicelo?
Abordzi Solomon Dominic uthi
Agasti 30, 2019 kwi 10: 45 pm
Nceda unomdla kwincwadi yesizwe ye-petroleum Corporate (gnpc) ye-ebook
NguThixo Newmann uthi
Agasti 29, 2019 kwi-11: 48 am
Plz ndinomdla kwi Ebook
UVida nwonra ndah uthi
Agasti 22, 2019 kwi 11: 46 pm
Pls Ndenze impazamo kwigama lam whiles zigcwalisa iifom ze-Intanethi zabafundi abaphantsi kweziqu.pls ungandinceda njani kule
Agasti 22, 2019 kwi 5: 18 pm
Nceda usenze nini isicelo se-2019 / 2020
UJoshua Amenuvor uthi
Agasti 22, 2019 kwi-9: 36 am
Ndifumene ukwamkelwa e-uew ukuba ndilandele imfundo yemathematics 2019/2020 kwaye ndinqwenela kakhulu isifundi sakho. Ndinomdla kwi-EBOOK yakho. Nceda undazise xa iifom zifumaneka ngokulula. Enkosi kwaye ubala ngoncedo lwakho oluqhelekileyo.
UDaniel Dwamena uthi
Agasti 19, 2019 kwi 5: 22 pm
Ukudibanisa ndinomdla kwi-GNPC E INCWADANA YENCWADANA
Nceda zonke iinkcukacha zithunyelwe ngeposi yam danieldwamena06@gmail.com
UAtsu Patrick uthi
Agasti 19, 2019 kwi 4: 29 pm
Ndicela enye yeencwadi
Ndiza kufunda iJografi
Turkson Susana uthi
Agasti 19, 2019 kwi 1: 56 pm
Nceda ugcwalise le fomu sele ibhaliwe i-2017 / 2018 ukuba kufuneka ndiqhubeke ndiyizalise
URonald Azumah uthi
Agasti 19, 2019 kwi-10: 44 am
Ndicela u-Ronald Azumah.ndamkelwe eyunivesithi kwiDevelopment Study ukuze ndifundele ubugqirha bezonyango elebhu.Ndinomdla ongazenzisiyo kwesi sifunda kwaye ndingavuya kakhulu xa ndinikwa lo mfundo kwaye ndinomdla kwincwadi ye-ebook.
Agasti 19, 2019 kwi-10: 22 am
Ndicela u-Ronald Azumah.ndamkelwe kwiDyunivesithi yeZifundo zoPhuculo ukuba ndifundele ubugqirha bezamayeza.Ndinomdla ongazenzisiyo kwesi sifundo kwaye ndinganombulelo kakhulu ukuba uzuze lo msebenzi.
U-Abraham Awortwe uthi
Agasti 15, 2019 kwi 6: 31 pm
Ndingu-Abraham Awortwe, ndisandula ukugqiba kwisikolo samabanga aphakamileyo kulo nyaka we-2019. Ndifuna ukuqhubeka nemfundo yam, kodwa ndijamelene nobunzima bemali. Ndicela umncedisi wezemali ukuqhubekeka nemfundo yam kwinqanaba lamabanga aphezulu.Ndicela uncedo kuwe (GNPC), ndifuna isikolo kunyaka olandelayo 2020 ndicela undincedise. Isuka eGhana-Shama
UFeliksi Cobbinah uthi
Agasti 13, 2019 kwi-12: 47 am
Nceda uqhubeke ngokufunda kwaye ndifuna ukufaka isicelo sobufundi
U-YUSSIF ABDUL EAHAB uthi
Agasti 10, 2019 kwi 6: 36 pm
Ndingu-Abdul Wahab ofundisisa isayensi yesondlo kwikhampasi ye-UDS Tamale, ndingavuya kakhulu xa ungandibona kwaye xa isicelo sele sikulungele nokuba ndingekho emgceni.may uThixo awusikelele wonke umzamo wakho. Siyavuya kubo bonke.
Agasti 10, 2019 kwi 4: 53 pm
Agasti 9, 2019 kwi 6: 01 pm
Nceda uyivule nini indawo yokufundela abafundi baseGhana abafunda apha?
UZacchaeus Napuo uthi
Agasti 9, 2019 kwi 5: 36 pm
Ndicela ibook. Ndiyakubulela kwangaphambili.
NDISELULA I-OPATA uthi
Agasti 9, 2019 kwi 4: 10 pm
Nceda ndiyidinge i-EBOOK ukuze ndizihlaziye ngokwam kwisicelo sokufunda ukuze ndenze inkqubo yenkosi yam kunye nesikolo sikarhulumente eGhana okanye phesheya ukuze ndibeke inqanaba lam kwisikhundla esihle nesinoxanduva lokunceda kuphuhliso lwelizwe lam iGhana kunye nehlabathi liphela.
Umnxeba: 0205354557 / 0557733116
UMARIYA SOKU ENYONAM uthi
Agasti 9, 2019 kwi 3: 59 pm
Ndicela i-Ebook indikhokele ukuba ndibhalise i-gnpcghana scholarship ukuze ndikwazi ukugqibezela inkqubo yenkosi yam kunye neKNUST Kumasi. Nceda undenzele oku kulungileyo.
I-Misbaw Bamba uthi
Agasti 7, 2019 kwi 8: 11 pm
Ndicela ukufumana ikhonkco kwisicelo sokufunda?
Boafoh Efe Selina uthi
Agasti 4, 2019 kwi 2: 02 pm
Nceda umfundi wediploma afake isicelo pls kwaye ndifuna iebook
U-Ernest Asare-Bediako uthi
Agasti 4, 2019 kwi-3: 02 am
Ngaba iza kuba yi-36 nge-Okthobha, i-2019, ndingasifaka isicelo sokufunda kwinkqubo ye-MPhil, iBiotechnology kwi-KNUST?
URafael Amankwah uthi
Agasti 3, 2019 kwi 3: 20 pm
Nceda ndinguRafael Amankwah kwaye ndingavuya ukuba ndifumana uhlaziyo lokuba iifom zesidanga sokuqala se-GNPC zikwincwadi ye-ebook
Midodzi Worlanyo uthi
Julayi 31, 2019 kwi-9: 16 am
Ndinomdla wokufumana le ncwadi
UHayford Arthur Jnr. uthi
Julayi 27, 2019 kwi-2: 37 am
Enkosi ngeli nyathelo. Ndinomdla kwi-Ebook.
U-Ofori Adams Godfred uthi
Julayi 24, 2019 kwi-1: 20 pm
Molo, inkqubo yam yokufunda yi-BSc Accounting Education.
Ngaba ndilungele ukufaka isicelo?
Ubulumko x -zeal uthi
Julayi 23, 2019 kwi-4: 34 pm
Ndidinga lebook nceda
Ingaba le fomu yalo nyaka izakuphuma nini
Julayi 18, 2019 kwi-2: 14 pm
Ndinesibonelelo esineemeko ezithile kwiYunivesithi yaseCoventry, e-UK, ukuba ndifunde iMcc yeoyile ye-Merc kunye neRjini. Ubhaliso luqala nge-16th kaSeptemba, 2019, ndingafumana isibonelelo sezifundo zam.
Ndiya kubulela ngoncedo lwakho.
UCollins Agyeman uthi
Julayi 18, 2019 kwi-1: 06 am
Nceda uncede nini ukuvulwa kwesibonelelo se-GNPC sabantu baseGhana abafundela apha.
Umnqophiso ugogo uthi
Julayi 18, 2019 kwi-9: 54 am
Izifundo zokufunda zisaza kuqala kodwa uya kwaziswa ngokufanelekileyo xa uqala. Kodwa inokwenzeka kuphela ukuba ubhalisile kuhlaziyo lwethu lwemihla ngemihla. Cofa kwikhonkco elingezantsi ukuze ujoyine
I-Steffi rockson uthi
Julayi 17, 2019 kwi-9: 46 pm
Ngaba umfundi wonxibelelwano angafaka isicelo sobuxhakaxhaka bemasters
Julayi 18, 2019 kwi-9: 57 am
SineMasters Scholarship yabafundi boNxibelelwano. Cofa nje kwikhonkco elingezantsi ukwenza oko
Unako ukubuyela kuthi ngolwazi olungaphezulu
Inhlanhla njengoko usebenza!
Julayi 17, 2019 kwi-9: 44 pm
Nceda umfundi onxibelelwano enze isicelo sobuchule bokufunda ngobuchule
Julayi 18, 2019 kwi-9: 59 am
U-Eunice Nyarko Coffie uthi
Julayi 16, 2019 kwi-2: 36 pm
Nceda ndamkelwe kwi-uew ukuba ndilandele imfundo ye-physics kwaye ndingathanda ukunikwa imali yokufunda. Ndinomdla kwi-EBOOK yakho. Enkosi ngokuthembela kuncedo lwakho.
Chidinma Kalu uthi
Julayi 18, 2019 kwi-9: 18 am
Molo uEunice Nyarko Coffie,
Wamkelekile kwaye ndiyabulela ngokuthemba indawo yethu. Ndwendwela ngobubele https://worldscholarshipforum.com/free-scholarship-ebooks-for-international-students/ Ukukhuphela le ebook.
URaphael Amankwah uthi
Julayi 13, 2019 kwi-12: 33 pm
Nceda unomdla kakhulu kodwa kubonakala ngathi ihambile i-eBook
Nceda undazise kakhulu xa kuvulwa umhla wokufaka iifom zokufunda….
Christian Chiemezie uthi
Julayi 15, 2019 kwi-8: 52 am
Uya kwaziswa kunye ne-eBook xa iphumile. Kodwa qhubeka ujonge le ndawo.
Emmaham Eunice uthi
Julayi 10, 2019 kwi-7: 41 am
Ndinombulelo ongazenzisiyo ngeli thuba. Nceda ndinomdla wokufumana ikopi ye-Ebook. Nceda kuphela ifom ekufuneka uyigcwalisile okanye uyakufuna ukongeza ezinye izinamathiselo.
Ukunyusa iAribi uthi
Julayi 8, 2019 kwi-12: 25 pm
Igama lam ndinguFoster Aribi. Nceda ndenze njani isicelo sokufunda kulo nyaka.
USamuel Owusu uthi
Julayi 3, 2019 kwi-3: 24 pm
Nceda ndiyakunomdla kwi-Ebook
Julayi 3, 2019 kwi-3: 22 pm
Emefa Mensah-Dogbatse uthi
Julayi 3, 2019 kwi-10: 27 am
NAKUBA UNGAKHONA UKUBHALA NGOKUBHALA NGOKUBA I-EBOOK I-SCHOLARSHIP
Julayi 1, 2019 kwi-3: 42 pm
Nceda ndinomdla kwi-eBook scholarship
Valantine Afeku uthi
Julayi 1, 2019 kwi-8: 51 am
Nceda ndifuna enye ye-eBook yakho
Juni 30, 2019 kwi-7: 08 pm
Ngaba unomdla kwi-eBook kangangoko sifunde. Ngaba ukubonelela nge-ICT ngokutsha.
ASAANA Morris uthi
Juni 30, 2019 kwi-5: 10 pm
Pls ndinomdla kwi-E-Book yokufunda
Juni 28, 2019 kwi-11: 46 pm
I-GNPC yenza ngokwenene umsebenzi omkhulu.
nceda ndinomdla kwi-ebook
UEliya uPetros uthi
Juni 28, 2019 kwi-11: 37 pm
Ndiyakuthanda ukuba ne-gnpc scholarship ukuze ndixhase imfundo yam. Ndingomdla kwi-E-ncwadi kwakhona
UPhyllis Amon uthi
Juni 28, 2019 kwi-4: 53 pm
Nceda ndifuna ikopi ye-ebook
Agyiri Francis uthi
Juni 27, 2019 kwi-5: 59 pm
Nceda ndifuna i-E-book scholarship
ATIEGAH NATHANIEL uthi
Juni 26, 2019 kwi-11: 45
I-GNPC iguqula abasweleyo kodwa amaphupha abafundi afundisayo ayinyani…. Ngamana iGhana ingaqhubeka nokufumanisa ngakumbi IINDAWO ZOKUTHUTHA ukonyusa amandla e-GNPC
Amankwah Jael uthi
Juni 26, 2019 kwi-10: 57
Nceda ndiyathanda kakhulu ukufumana i-eBook
Amankwah Jael Akosua Biamah uthi
Juni 26, 2019 kwi-10: 28
I-Pease Ndifuna ikopi ye-eBook
Koomson uYehoshafati uthi
Juni 25, 2019 kwi-2: 23 pm
Dominic owusu sekyere uthi
Juni 22, 2019 kwi-11: 24 pm
Nceda ndinomdla kakhulu kwi-ebook.
Adu Peter uthi
Juni 22, 2019 kwi-10: 48 pm
Ndifuna i-eBook nceda.
Juni 21, 2019 kwi-6: 40
Nceda ndinomdla kwi-E-ncwadi yokufunda. Ndiyidinga nyani le mali yokufunda
Juni 21, 2019 kwi-6: 38
Nceda ndinomdla kwi-E-book ye-scholarship.
Juni 21, 2019 kwi-6: 35
Nceda ndikwi-6in incwadi yokufunda ye-E.
Nkansah yavuma uthi
Juni 18, 2019 kwi-4: 02 pm
nceda ndinomdla kwi-e-book scholarship.
Owusu-Nketia Frank uthi
Juni 18, 2019 kwi-12: 26
Nceda igama lam nguFrank kwaye ndinomdla kunye ne-EBook.
Don Kovio uthi
Juni 17, 2019 kwi-11: 36
Juni 15, 2019 kwi-7: 15 pm
Nceda ndiyifunayo incwadi yokufundiswa
Juni 14, 2019 kwi-4: 13 pm
Jackline Klutse uthi
Juni 12, 2019 kwi-10: 01
Sinenzuzo kakhulu uBen ngelo thuba oye wahamba ngalo, uThixo uyasikelela ngokubanzi yonke imizamo yakho
UJoseph Felix uthi
Juni 11, 2019 kwi-9: 58 pm
Juni 11, 2019 kwi-12: 21 pm
Nceda ndinomdla kwi-Ebook… .. nakwisifundiswa ngokunjalo…
Juni 11, 2019 kwi-11: 35
Ndifuna ukukubonga kakhulu ngeli thuba elikhulu elinikwe lona ukunceda ukufezekisa amaphupha ethu nokunceda ukuphakamisa igama likaMama iGhana. Ndiyathandaza ukuba ndibe ngenye yeenhlanhla ukuba ndinike leli thuba
Nceda ndidibanisa kwi-eBook!
Nyame uIsake uthi
Juni 11, 2019 kwi-3: 55
Ingaba kukho nayiphi na imali efuneka ihlawulwe ngaphambi kokuba inkqubo yokubhalwa kwemali iqale?
Ngaba ndivela kwimvelaphi yezemali ehluphekileyo, ndingayiphumelela imali yokufunda kuba andazi naliphi na igosa.
Juni 11, 2019 kwi-1: 43
Nceda ndinakho ikopi ye-Ebook
Maxwell Commey uthi
Juni 11, 2019 kwi-1: 11
Nceda, ndinomdla kakhulu kwi-E-ncwadi kunye nokufundisisa kakhulu ukuxhasa imfundo yam.
Millicent Acheampong uthi
Juni 10, 2019 kwi-5: 11 pm
Nceda ndifuna ukufaka isicelo sokufunda kodwa andazi ukuba ndenze njani malunga naso
Yaa Serwaa Karikari uthi
Juni 9, 2019 kwi-11: 40 pm
Ndiyakunomdla kwi-ebook scholarship
Asapio Sampson uthi
Juni 8, 2019 kwi-12: 42
Ndicela ukuba wazi ukuba sele useyunivesithi, ngaba ulithuba elilinganayo lokufaka isicelo sobuzolwazi? Enkosi ngeli thuba.
Juni 4, 2019 kwi-4: 32
Nceda nceda nini i-2019 / 2020 ifom ye-scholarship ifom
Elizabeth Anning uthi
Juni 9, 2019 kwi-4: 18 pm
Nceda ndinomdla kakhulu kwi-e-ncwadi kunye nakwisifundo se-GNPC. Enkosi
Anderson Amos uthi
Juni 3, 2019 kwi-10: 38 pm
Nceda ndibanomdla kakhulu kwinkqubo ye-GNPC yokufundiswa kunye ne-award winning eBook. Ndingayifumana njani iifom?
UPauline Boachie-Ansah uthi
Juni 3, 2019 kwi-1: 02 pm
Ndiya kuvuyisa ukunikezelwa kwe-GNPC isiseko semfundo yokuncedisa ukuba ndiqhubele ikhosi yam.
Juni 11, 2019 kwi-3: 54
Ngaba ndivela kwimvelaphi yezemali ehluphekileyo, ndingayiphumelela i-scholarship kuba andazi naliphi na igosa.
Prince Asamoah uthi
Juni 3, 2019 kwi-11: 55
Nceda Mnumzana, ndinomdla kakhulu kwimfundo
Evelyn Serwaa Sarpong uthi
Juni 1, 2019 kwi-6: 22 pm
Evelyn Serwaa Sarpong
Nceda ndiyakhathalela ukufundiswa kwe-GNPC
Evans Gborglah uthi
Meyi 31, 2019 kwi-5: 08 pm
nceda ndonwabile kwaye ndinomdla kwi-gnpc yokufunda.
Aminu Musah uthi
Meyi 30, 2019 kwi-9: 53 pm
Nceda ufundiso lwabafundi abatsha kuphela okanye abafundi abaqhubekayo banokufaka isicelo? Enkosi
Akolbilla Emmanuel N uthi
Meyi 30, 2019 kwi-4: 19 pm
UTimoti Abeto uthi
Meyi 30, 2019 kwi-3: 00 pm
Ndiya kuba nombulelo gqitha ukuba ndingayifumana le ngxowa-mali
Meyi 30, 2019 kwi-2: 59 pm
nceda ndingayifumana njani incwadi ye-scholarship
UDaniel Martey Awah uthi
Meyi 30, 2019 kwi-11: 29
Mna Daniyeli, ndinomdla kakhulu kwimfundo YAKHO. Enkosi . Ndifuna ne-EBOOK nayo
USamuel Jasper uthi
Meyi 30, 2019 kwi-10: 34
Nceda uphume nini lo nyaka?
Adu Isaac uthi
Meyi 30, 2019 kwi-8: 02
Nceda, ndinomdla kwi-GPNC i-2019 / 2020
Meyi 30, 2019 kwi-8: 00
Odame Nicholas uthi
Meyi 29, 2019 kwi-2: 03 pm
Inkqubo iya kuba luncedo. Ndiyakwenza nini na? Ngaba ukuqhubeka nomfundi kuya kusebenza?
Mensah Luqman Addy uthi
Meyi 29, 2019 kwi-1: 19 pm
Nceda, ndinomdla ngokwenene kwi-scholarship ye-GNPC
Meyi 29, 2019 kwi-1: 14 pm
Nceda unomdla wokwenyani kubufundi be-GNPC
Addo Richmond uthi
Meyi 28, 2019 kwi-4: 52 pm
Nceda, ndinomdla kakhulu kwi-scholarship ye-GNPC
Meyi 28, 2019 kwi-3: 57 pm
Nceda, ndinomdla kakhulu kwi-scholarship ye-GNPC. Nceda unike enye.
Ogbordjor Flora Dede uthi
Meyi 28, 2019 kwi-2: 36 pm
nceda ndiyakhathalela kwi-GNPC isiseko semfundo
Ofori Mensah Edem Ekhanyayo uthi
Meyi 27, 2019 kwi-3: 38 pm
Nceda, ndinomdla kwindlu ye-GNPC
Darkwah akusi uthi
Meyi 27, 2019 kwi-1: 50 pm
Meyi 27, 2019 kwi-1: 46 pm
Korankye Rebecca uthi
Meyi 27, 2019 kwi-1: 38 pm
Nceda ndinomdla kwi-E-ncwadi
Evans kyei Danso uthi
Meyi 25, 2019 kwi-11: 20 pm
Siyabonga ngeli thuba
Meyi 25, 2019 kwi-11: 17 pm
Nceda kwaye unomdla kwi-EBook.
Siyabonga ngeli thuba.
Addo Foster uthi
Meyi 24, 2019 kwi-12: 41 pm
Nceda ndiyakunomdla kwi-ebook yakho
Meyi 24, 2019 kwi-12: 38 pm
Ndiyomdla kwi-ebook yakho
Jiel Norteye uthi
Meyi 23, 2019 kwi-10: 19 pm
Nceda Ndiyakhathalela kwi-Ebook
Desmond Tamakloe uthi
Meyi 23, 2019 kwi-10: 17 pm
Abubakar Latifa uthi
Meyi 23, 2019 kwi-8: 19 pm
Ukutyanjiswa kukaYakobi uthi
Meyi 23, 2019 kwi-5: 17 pm
Nceda ndinomdla kwi-E-ncwadi.
Abu Amponsah Owuraku uthi
Meyi 23, 2019 kwi-12: 19 pm
Kwaku Poku uthi
Meyi 23, 2019 kwi-10: 57
Nceda baqeshwe ngabasebenzi, nini na ukuba iifomu ze-GNPC zikhutshwe?
UPeter Oppong Junior uthi
Meyi 22, 2019 kwi-9: 16 pm
Nceda ndiyakunomdla wokufumana i-Ebook
Avornyo Rosemary uthi
Meyi 22, 2019 kwi-12: 54 pm
Meyi 22, 2019 kwi-12: 45
Akuffo Bright uthi
Meyi 21, 2019 kwi-10: 40
Ndiyabonga ngethuba lokuphumelela i-EBook ye-scholarship. Ndiyayixabisa ngokwenene. Ndiya kuthanda ukufaka isicelo sokufunyanwa kwe-scholarship ukuze ndilandele idigri yam yoBunjineli boLuntu.
Atiiga Hamidu uthi
Meyi 21, 2019 kwi-5: 29
UThixo uyibusise i-GNPC ngomsebenzi omhle abenzayo
Umdla wam ungo-ENVIRONMENT
Medad Ketteh uthi
Meyi 20, 2019 kwi-9: 51
Ndiyabulela i-GNPC ngeli thuba elinikezelwa ngabafundi baseGhana ukuqhubela phambili imfundo yethu.
Induduzo Owusu Kedjah uthi
Meyi 20, 2019 kwi-1: 14
I-Amarteifio clifford uthi
Meyi 19, 2019 kwi-6: 28 pm
Ndiyacela ndiyi Clifford kwaye ndiyazi ukuba ukufundiswa kwabafundi bezobunzululwazi kunye nobunjineli. Ngabafundi ababenokwenza ishishini okanye banikezela ii-coarses ezinxulumene nezoshishino kwiiyunivesithi zikarhulumente.
John Dickson Mensah uthi
Meyi 19, 2019 kwi-1: 04 pm
Ndiyakuthanda ukufunda le ncwadi.
UOpoku Koduah uthi
Meyi 18, 2019 kwi-5: 50 pm
Nceda unomdla kule e-ncwadi.
Anankansa Elisha uthi
Meyi 17, 2019 kwi-6: 05 pm
Ndiyomdla kwi-eBook !!
Mohammed Raji Abdul-Aziz uthi
Meyi 17, 2019 kwi-5: 14 pm
UJoseph Mensah uthi
Meyi 16, 2019 kwi-11: 53 pm
I-Pls inomdla kwi-eBook
USamuweli uYuda uthi
Meyi 16, 2019 kwi-11: 37 pm
Ndifuna ukukubonga kakhulu ngeli thuba elikhulu elinikwe lona ukunceda ukufezekisa amaphupha ethu nokukunceda igama likaMama iGhana; ayeekooo kwaye uThixo abusise uMama waseGhana!
Nceda ndiyakunomdla kwi-eBook!
Sarah Esinam Gaba uthi
Meyi 14, 2019 kwi-12: 02 pm
Meyi 14, 2019 kwi-11: 58
UBenjamin Atta Annan uthi
Meyi 12, 2019 kwi-11: 59 pm
Nceda unomdla kwi-ebook.
2. Nceda ndingabonwa njani xa ifomu liphuma.
Meyi 9, 2019 kwi-9: 22 pm
Nceda iifom ze 2019 / 2020 ziphuma ?? Endikhuphelayo yi-2017 / 2018
Theophilus Abaasah Gyan uthi
Meyi 4, 2019 kwi-1: 13
Nceda ndiyakunomdla kwi-e-book scholarship.
UJanet Afia Boadu uthi
Epreli 29, 2019 kwi-3: 07 pm
Nceda ndinomdla kwi-e-book scholarship
Epreli 28, 2019 kwi-6: 13 pm
Igalelo: Ndinomdla kwi-E-book scholarship
Siibu Zian Saib Hadi uthi
Epreli 27, 2019 kwi-5: 59 pm
Igalelo: nceda ndiyifunde incwadi ye-scholarship
April 27, 2019 kwi 9: 02 am
Nceda nini i-2019 / 2020 i-GNPC i-scholarship iza kuqala?
MADUGU MOHAMMED ABUBAKAR uthi
Epreli 25, 2019 kwi-5: 07 pm
Nceda uya kufakwa kwi-intanethi okanye kwisikhokelo
Mejida Yakubu uthi
Epreli 24, 2019 kwi-6: 04 pm
Nceda unomdla kwincwadi ye-E
Ampim yeboah frank uthi
Epreli 23, 2019 kwi-8: 34 pm
Ulungele ukuhlwa, nceda ndibanomdla kakhulu kwi-book
April 22, 2019 kwi 1: 26 am
Nceda ukuba ufunda i-Akhawuntingi kwiDyunivesithi yezobugcisa ungasifaka isicelo semfundo ye-GNPC?
ANGSONGNA CLAUDIUS B. uthi
Epreli 17, 2019 kwi-4: 29 pm
NAKUNCEDA NDIFUNDA UKUFUNDA I-MSC OCCUPATIONAL HYGIENE KWI-UNIVERSITY YASEGHANA, INGXENYE NDIQINISELWE KWI-SCHOLARSHIP?
Epreli 17, 2019 kwi-4: 27 pm
FUNEKA UTHANDANE KWEENcwadi
April 19, 2019 kwi 8: 01 am
Ndiyabulela ngokukhetha umdla kwi-eBook yethu ye-award-winning Ebook.
Nceda u tyelele ikhonkco elingezantsi ukukhuphela le Ebook ngokukhethekileyo kuwe.
Unokwenza uphephaze nayiphi na ididi yokubhaliselwa kwamanqaku kumathuba amaninzi okufundela;
Ukufunda Ngaphandle KweeScholarships
Masibuyele ngokubuya kuthi ukuze uthole ulwazi olungakumbi.
Amanda Achaab uthi
April 15, 2019 kwi 11: 24 am
Unomdla kwi-ebook scholarship
April 19, 2019 kwi 7: 58 am
Epreli 9, 2019 kwi-2: 59 pm
nceda 2019 / 2020 ifomu
April 11, 2019 kwi 11: 33 am
Ifom ye2019 / 2020 ayifakwanga.
Kodwa, Unokukhangela ngaphaya kwanoma yiyiphi inqanaba lokubhaliselwa kwee-scholarship amathuba;
UDorcas Aloko uthi
Epreli 8, 2019 kwi-1: 55 pm
Nceda ndinomdla kwi-eBook. Kutheni ungaxhasi ukuba uqhube abafundi?
April 10, 2019 kwi 9: 29 am
Amdaway M.Misbaw Bamba uthi
Epreli 4, 2019 kwi-9: 11 pm
Nceda ndinomdla kwincwadi yokufunda.
Epreli 4, 2019 kwi-2: 17 pm
Molo, ndinomdla kwi-e-ncwadi yokufunda. Enkosi
Epreli 4, 2019 kwi-3: 18 pm
UMargaret Amarh uthi
Matshi 29, 2019 kwi-3: 42 pm
Nceda ndiyakhathalela ebhokisini ye-scholarship. Enkosi
April 1, 2019 kwi 9: 06 am
Sylvester Abuliga uthi
Matshi 29, 2019 kwi-1: 29 pm
April 1, 2019 kwi 8: 45 am
Karim Adomah Farida uthi
Matshi 27, 2019 kwi-9: 27 pm
Nceda ndide ndikwinqanaba le-100 ndingayifaka isicelo seminyaka elandelayo
Matshi 28, 2019 kwi-11: 46 am
Xa ucofa kwikhonkco elingezantsi, kukho umnxibelelwano oya kukukhokelela apho ufumana ifom yesicelo. Ngomkhethe khetha i-scholarship ofanelekileyo kwaye uyisebenzise.
UmKristu Eddy Bonney uthi
Matshi 25, 2019 kwi-10: 42 pm
Nceda ndifuna enye yeencwadi zakho zamahhala. Enkosi
Matshi 27, 2019 kwi-9: 31 am
Emmanuel Abel Imah uthi
Matshi 21, 2019 kwi-2: 46 pm
Nceda ndifuna ukuba undixelele xa isicelo se-2019 scholarship siqala
Matshi 22, 2019 kwi-8: 29 am
Ndiya kukucebisa ukuba uvakashele isayithi rhoqo ukuze ugweme ukushiya umhla wokugqibela we-scholarship. Kwakhona, unokujoyina iphepha lethu le-facebook ukuze uhlaziywe rhoqo. Ngomfanekiso nqakraza kwikhonkco elingezantsi ukwenza loo nto
UWilliam Boakye-Bandoh uthi
Matshi 20, 2019 kwi-4: 25 am
Ndicela undingenelele kwi-E-book ye-scholarship. Enkosi
Matshi 20, 2019 kwi-4: 40 pm
Matshi 19, 2019 kwi-7: 51 pm
Ndiyathemba ukuba abafundi bezempilo bayafaneleka ukunikezelwa.
Matshi 20, 2019 kwi-12: 18 pm
UJonathan Ekow Quaicoe uthi
Matshi 18, 2019 kwi-6: 22 pm
Nceda ndiyakhathalela ebhokisini ye-scholarship.
Matshi 19, 2019 kwi-11: 59 am
UJames Boadu Frimpong uthi
Matshi 15, 2019 kwi-11: 30 pm
Ndiyomdla kwi-scholarship e-ncwadi.
Matshi 18, 2019 kwi-4: 14 pm
Matshi 15, 2019 kwi-2: 59 pm
Matshi 18, 2019 kwi-4: 02 pm
Kalebi othandekayo, ndiyathemba ukuba ufake isicelo?
Ukuba ungakhangeli ngokukhawuleza kwikhonkco elingezantsi ukufaka isicelo somfundi
James Ayensu uthi
Matshi 14, 2019 kwi-10: 26 pm
Nceda unomdla kwi-Scholarship Ebook yakho. Nceda undithumelele ikopi.
Ndiyabulela ngobubele bakho.
Matshi 15, 2019 kwi-4: 01 pm
UMaxwell Bediako Asare uthi
Matshi 14, 2019 kwi-5: 13 am
Uncedo kakhulu kwaye iza kwabelwana kodwa ngaba ndingena kwi-eBook kwi-scholarship?
Matshi 15, 2019 kwi-3: 56 pm
I-Panfo Kwadwo Ankomah uthi
Matshi 13, 2019 kwi-10: 37 pm
Matshi 15, 2019 kwi-3: 02 pm
Matshi 13, 2019 kwi-10: 33 pm
Nceda ndinomdla kakhulu kwi-E-ncwadi
Yeboah Bertha Asuamah uthi
Matshi 11, 2019 kwi-8: 37 am
Nceda ndinomdla kakhulu kwi-eBook
Ndifuna ukwazi ukuba isicelo seedigri zesidanga sokuqala 2019 siza kuqala nini kwaye umhla wokugqibela.thank you
Matshi 11, 2019 kwi-2: 54 pm
DAKURAH EDMOND uthi
Matshi 9, 2019 kwi-10: 58 pm
NGOKUKHONA UKUBA NDIFUNYE I-BOOKHLELO YE-SCHOLARSHIP
Matshi 11, 2019 kwi-1: 47 pm
Sandra Iddrisu uthi
Matshi 8, 2019 kwi-7: 36 pm
Sawu ndi nguSandra
Matshi 11, 2019 kwi-11: 21 am
Issah Musah uthi
Matshi 7, 2019 kwi-6: 07 pm
Nceda ndiyakunomdla kwi-e-book scholarship
Matshi 11, 2019 kwi-10: 12 am
Addai Adjei Vincent uthi
Matshi 4, 2019 kwi-12: 03 pm
Matshi 4, 2019 kwi-2: 11 pm
Jennifer Amoah uthi
Matshi 4, 2019 kwi-12: 02 pm
Matshi 4, 2019 kwi-2: 10 pm
Matshi 4, 2019 kwi-12: 00 pm
Nceda ndiyakunomdla kwi-ebook.
Christabel Serwaa Ankyaa uthi
Juni 8, 2019 kwi-9: 30 pm
Ndinomdla kakhulu kumfundi we-GNPC kwaye ngokwenene ndifuna ukuba ngumxhamli
AWUKU GODWIN uthi
Matshi 3, 2019 kwi-5: 30 pm
Nceda ndiyakhathalela kwi-Echolarship E-book.
Matshi 4, 2019 kwi-9: 40 am
UJoseph Agyapong Abbey uthi
Matshi 2, 2019 kwi-1: 28 am
Matshi 4, 2019 kwi-9: 37 am
Aaron Charway uthi
Matshi 1, 2019 kwi-12: 39 pm
nceda, nceda ndinomdla kwi-ebook
Matshi 1, 2019 kwi-12: 57 pm
AYETTEY GIDEON uthi
Matshi 1, 2019 kwi-11: 10 am
Nceda ndifuna ngempela i-eBook
Matshi 1, 2019 kwi-11: 49 am
February 28, 2019 kwi 7: 50 pm
Ndiyacela ukuba ndifumana phi iifom ze sicelo ze2019 / 2020 .Siyabonga
Matshi 1, 2019 kwi-11: 22 am
I-scholarship ayisayi kuqala, ngoko ndiya kukucebisa ukuba uvakashele isayithi rhoqo ukuze ugweme ukushiya umhla wokugqibela. Kucelwa ukhethe kwikhonkco elingezantsi
Afia Patience uthi
February 27, 2019 kwi 3: 49 am
Yaye nini i-scholarship iqala
February 27, 2019 kwi 12: 12 pm
Issaka James Ndebugri uthi
February 25, 2019 kwi 9: 01 pm
Izimvo: nceda umfundi okwinqanaba le-100 unokufaka isicelo sokufunda?
February 26, 2019 kwi 9: 41 am
Kucelwa ukhethe kwikhonkco elingezantsi uze ufunde ulwazi ngenyameko, impendulo yakho ilapha.
Boakye Andrews uthi
February 25, 2019 kwi 10: 00 am
Nceda ndiyifunayo i-ebook ngoku
February 25, 2019 kwi 2: 58 pm
Ndiza kukucebisa ukuba uvakashele isayithi rhoqo ukuze ugweme ukushiya umhla wokugqibela
February 25, 2019 kwi 9: 54 am
Nceda ndifuna i-E ncwadi
February 25, 2019 kwi 2: 56 pm
UKUXHUMA HANSON uthi
February 22, 2019 kwi 4: 13 pm
February 25, 2019 kwi 9: 44 am
February 22, 2019 kwi 9: 38 am
Ndinomdla kwi-e-ncwadi yokufunda
February 25, 2019 kwi 9: 16 am
February 21, 2019 kwi 12: 38 am
Ndinomdla kwi-e-book ye-schorlarship. Enkosi
February 21, 2019 kwi 12: 43 pm
Amathuba kwiBakala lesiGqeba
UPhyllis Annan uthi
February 19, 2019 kwi 8: 16 pm
Ndinomdla kwi-eBook nceda.
Ngaba i-2019 / 2020 i-GNPC i-scholarship ivulelwe isicelo kwakhona?
February 20, 2019 kwi 9: 29 am
I-scholarship ayisayi kuqalwa kodwa ndiya kukucebisa ukuba u tyelele indawo rhoqo ukuze ugweme ukushiya umhla wokugqibela
February 19, 2019 kwi 4: 24 pm
Ndingayifumana i-2018/2019 yokufunda ngonyaka? Ndinecebiso ngo-2018/2019. Kwaye ngoku ndifunda iBsc. Imfundo yeFizikiki kwiYunivesithi yeMfundo, eWinneba
February 20, 2019 kwi 8: 55 am
Uhlala kwindawo elungileyo kodwa nceda uqaphele ukuba asinikezeli ngolu bhasari kodwa unike ulwazi malunga nabo.
Xa ucofa kwikhonkco elingezansi, kwi-scholarship nganye, kukho isiqhagamshelo esiya kukukhokelela apho ufuna ifomu yesicelo. Ngomkhethe khetha i-scholarship ofanelekileyo kwaye uyisebenzise.
February 19, 2019 kwi 4: 19 pm
Ndivunyelwe kwiyunivesithi yemfundo, iWinneba kwi-2018 / 2019 ukufunda i-BSC Physics imfundo. Ndiyakwenza isicelo se-2019 / 2020 gnpc scholarship?
February 20, 2019 kwi 8: 32 am
Grace Grace uthi
February 19, 2019 kwi 1: 22 pm
Ingxelo: nceda ufumane i-Ebook yakho.
February 19, 2019 kwi 3: 22 pm
Paul kwauku uthi
February 19, 2019 kwi 1: 18 pm
Igalelo: nceda ndinomdla kwi-E-ncwadi yakho.
Fuseini Abukari uthi
February 19, 2019 kwi 9: 49 am
Ndinomdla kwi-eBook scholarship
February 19, 2019 kwi 2: 54 pm
ELVIS TAGAGU KODABAWE uthi
February 18, 2019 kwi 5: 10 am
pls Ndinomdla kwi-ebook. enkosi
February 18, 2019 kwi 2: 26 pm
February 18, 2019 kwi 5: 07 am
Umsebenzi omkhulu ukwenjenjalo ukucebisa ngokubanzi ukuphuhliswa kweli lizwe. Ndiyathandazela le mishini iya kufikelela kude.
February 18, 2019 kwi 2: 27 pm
Ithemba uthe wafaka isicelo, ukuba ungakhangeli ngokukhawuleza kwikhonkco elingezantsi ukwenza loo nto.
February 18, 2019 kwi 5: 03 am
Yiyiphi injongo efanelekileyo ngokwenene ekuphuhliseni ilizwe ekugqibeleni.
mhlawumbi le mishini iya kude!
UOsosu Appiah Godfred uthi
February 17, 2019 kwi 11: 26 am
Nceda ndifuna ngokukhawuleza i-eBook
February 18, 2019 kwi 2: 48 pm
February 17, 2019 kwi 11: 24 am
February 18, 2019 kwi 2: 47 pm
I-ABDUL-WARIS YUSSIF uthi
February 17, 2019 kwi 11: 23 am
February 18, 2019 kwi 2: 46 pm
February 17, 2019 kwi 11: 20 am
nceda, ndi-abdul-waris kwaye ndifuna ukufumanisa xa i-gnpc scholarship iza kuvulwa ku-2019.am inomdla ngokwenene.
February 19, 2019 kwi 2: 36 pm
I-scholarship ayifuni ukuqala kodwa ndiya kukucebisa ukuba utyelele indawo rhoqo ukuze uhlaziywe. Cofa kwikhonkco elingezantsi
Kuukyille Felix uthi
February 16, 2019 kwi 11: 47 pm
Izimvo: Ndinomdla kwi-Ebook.
UJoseph Baidoo uthi
February 16, 2019 kwi 10: 54 pm
Nceda wanikwa imvume yokunika i-Bsc Information Technology Education kwiYunivesithi yeMfundo, Winneba kwi-2018 / 2019 ngonyaka wemfundo. Ngaba ndivumelekile ukuba ndifake isicelo somfundi kwi-2019 / 2020 ngonyaka wemfundo?
February 18, 2019 kwi 4: 57 pm
Hayi, awulungelanga le mfundo. Kodwa kukho ezinye izifundi onokuthi ufake isicelo kuzo.
Ngomkhethe khetha i-scholarship ofanelekileyo kwaye uyisebenzise.
FELIX KUUKYILLE uthi
February 16, 2019 kwi 12: 47 am
Nceda ndiyakunomdla kwi-E-Book ye-scholarship.
February 18, 2019 kwi 12: 31 pm
February 15, 2019 kwi 10: 10 pm
Nceda uluhlu lwe-2018 / 2019 ngaphandle? Njengabafaki izicelo abatshintshiweyo?
February 18, 2019 kwi 12: 19 pm
Kucelwa ukhethe kwikhonkco elingezantsi ukuze ufumane okungakumbi malunga nolwazi olufunayo
UYOHN COFFIE uthi
February 11, 2019 kwi 11: 32 am
February 12, 2019 kwi 9: 14 am
UAbhigaliyil Badu Nyarko uthi
February 10, 2019 kwi 2: 26 am
I-Pls ndiyakhathalela kwii-Ebooks
February 12, 2019 kwi 9: 13 am
UEmmanuel Kofi Agbonuglah uthi
February 1, 2019 kwi 12: 32 pm
Ndibukeze ngobuchule kumhla we-2019-2020 wokuvulwa komnyaka we-scholarship nceda.
February 1, 2019 kwi 3: 15 pm
Ndiza kukucebisa ukuba u tyelele indawo rhoqo ukuze ugweme ukushiya umhla wokugqibela. Cofa kwikhonkco elingezantsi ukufikelela kule bhasari.
UAlfred Yeboah uthi
February 1, 2019 kwi 10: 17 am
nceda ndifuna i-ebook ngokukhawuleza
February 1, 2019 kwi 2: 53 pm
Juni 14, 2019 kwi-4: 04 pm
UMichael Fumey uthi
January 30, 2019 apha 7: 40 pm
Nceda ndifuna i-eBook ye-scholarship
January 31, 2019 apha 4: 12 pm
UWendy Koranteng uthi
January 30, 2019 apha 5: 25 pm
Nceda ndinomdla kwi-e-ncwadi yakho
January 31, 2019 apha 2: 29 pm
Lukaiya issah uthi
January 25, 2019 apha 3: 48 pm
Pls ndinomdla kwi-e-ncwadi
January 28, 2019 apha 2: 43 pm
January 28, 2019 apha 2: 42 pm
UBashiru Raidwana uthi
January 25, 2019 apha 2: 16 pm
Pls ndinomdla kwi-e-ncwadi yokufunda
January 28, 2019 apha 2: 22 pm
USamuel Ayeh uthi
January 21, 2019 apha 1: 59 pm
Nceda iifom ze2019 / 2020 ziphuma?
January 22, 2019 kwi 9: 41 am
Mzalwana uSamuweli. I-scholarship ayisayi kuqala. Ndiza kukucebisa ukuba u tyelele indawo rhoqo ukuze ugweme ukushiya umhla wokugqibela. Kucelwa ukhethe kwikhonkco elingezantsi
January 21, 2019 apha 1: 57 pm
January 22, 2019 kwi 9: 34 am
Sawubona uSamuweli, siyabonga ngokukhetha umdla kwi-Ebook yethu yokuphumelela i-Ebook.
URoda Anane uthi
January 18, 2019 apha 9: 28 pm
Nceda ndinguRhoda ongumGhana kwaye ndifuna ukubuza ukuba ngaba i-GNPC ifunyenwe i-GNPC yokufunda ngaphandle (ngaphandle)
January 21, 2019 kwi 11: 36 am
Kucelwa ukhethe kwikhonkco elingezantsi ukuhamba kwinqaku kwaye uza kufumana yonke inkcazelo ebalulekileyo oyifunayo
February 1, 2019 kwi 10: 20 am
February 1, 2019 kwi 2: 54 pm
Khangela nayiphi na apha
Ukuphononongwa kweTeachaway 2021: Isebenza njani | Iinkqubo zoPhononongo Matshi 4, 2021
Amathuba angama-10 amaVolontiya aBemi abaPhezulu ngo-2021 Matshi 3, 2021
I-10 ephezulu yokuSebenza ngokuSimahla phesheya ngo-2021 Matshi 3, 2021
I-15 yeyona Ndawo yeNtatheli ehlawulwa ngokuBalaseleyo ngo-2021 Matshi 3, 2021
Ileta yokuGqibela yoBunjineli eFanelekileyo | Iisampulu zasimahla kunye neetemplate Matshi 3, 2021
Fundiso lwaseAfrika EAustralia Scholarships Iingcebiso eziBalaseleyo zabafundi kwi2021 | Izikolo neMisebenzi Ulawulo loShishino lweeSholarships Scholarships Canada Scholarships zeKholeji Scholarships Scholarships IIMISEBENZI ZEMFUNO I-Jcholarships yaseJamani IZIKOLO Scholarships zezeMpilo Scholarships School High Scholarships yaseNdiya Ukhuphiswano lwaMazwe ngamazwe Iintlanganiso zamazwe ngamazwe IINGCUKACHA ZEMIHLABA internship Iimfundo eziphantsi zeefizi Ubutitshala beeSchool Scholarship Ukufundiswa kweNigerian Amathuba abantu baseAfrika I-PhD Scholarships Scholarships Postdoctoral Uphando lweeScholarships Ulwabiwo-mazwe ngamazwe Ubungcali beSifundo Ulwabiwo-mali kumazwe athuthukayo uphando lwezesayensi EMzantsi Afrika oScholarships FUNDA KWELINYE ILIZWE Isifundo e-Afrika Isifundo E-Asia Isifundo e-Australia Isifundo eKhanada Isifundo eYurophu Isifundo e-USA Iingcali zoBugcisa Iingqapheli zase-UK Iingqapheli zase-UK Akohlulwanga ZoBugcisa iiSchools Uvavanyo lweYunivesithi UScholarships
Imibuzo edlulileyo portal
Ilungelo lokushicilela © 2021 I-World Scholarship Forum
ISICELO: Ngaphandle kokuba kucacisiwe, iWorldscholarshipforum.com ayikho nayiphi na indlela ehambelana nayo nayiphi na yabanikezeli bee-scholarship abonakaliswe kule website kwaye ayibhalisi okanye inqubo yesicelo kuyo nayiphi na inhlangano. Izinto ezibonelelwe apha kuphela ngenjongo yolwazi. Abaveleli bayacetyiswa ukuba basebenzise ulwazi ngolwazi lwabo.
× Ncokola nathi